Jeneraly - Guangdong Meiling Internet Technology Co., Ltd.
Guangdong Meiling Internet Technology Co., Ltd dia natsangana tamin'ny taona 2009, avy eo namolavola orinasa mpanangom-bokatra miaraka amin'ny indostrian'ny andiam-pamokarana sy ny fikarohana, ny varotra elektronika, mampifandray ny fividianana fanomezana sy ny fiasan'ny marika.
Ny orinasantsika dia mampiditra loharanon-karena sy tombony amin'ny fahatsorana, finoana ary faniriana. Nandritra ny taona maro dia nahatratra ny fitomboan'ny fanjakana miorim-paka ny Meiling tamin'ny fikarohana ny fomba fandraharahana tamin'ny vanim-potoanan'ny internet, niara-niasa tamin'ny orinasa fanta-daza anatiny sy ivelany. Amin'izao fotoana izao, ny Meiling dia manana marika Internet marobe- Konka, Changhong, Nontaus, Daewoo, TER, MAK, BTSM. Ny tsirairay amin'izy ireo dia samy manana ny toerany eny an-tsena, mba hanomezana fahafaham-po fatratra ny traikefa tsy voatery ampiasain'ny mpampiasa avy amin'ny sehatra maro ary hamorona sehatra "Meiling Internet +". Amin'ny vanim-potoanan'ny Internet, ny "Meilling Internet +" dia mandray anjara amin'ny fanovana ho lasa orinasan-Internet tena izy, mba hiara-hamorona ekosistera handresy ny fandresena miaraka amin'ny fifaninanana fototra amin'ny fahamendrehana.Maherin'ny 10- taona ny fitomboana, za-draharaha amin'ny ODM ary koa amin'ny OEM. Miaraka amin'ny vokatra premium sy serivisinay, dia nanangana fiaraha-miasa tsara amin'ny mpanjifa amin'ny tsena anatiny sy ivelany izahay.
Ny "Meiling Internet +" dia tsy maintsy ho mpitari-dalana amin'ny fomba fandrosoana miovaova foana amin'ny ho avy.
Ny Meiling dia mpamatsy matihanina amin'ny fitaovana an-trano indrindra ao anatin'izany ny kojakojan-dakozia, kojakoja ao an-tokantrano, fanamafisam-peo, fanamorana ary fanadiovana, niasa tamin'ny fitaovana tao an-trano tany Chine nandritra ny 10 taona mahery izahay. Ankoatr'izay hamoronana Internet sy rafitra ekolojika mahery vaika sy miavaka. Manana safidy namboarina ihany koa izahay hanampiana ny mpanjifa hanatsara ny fantsom-pamokarany ho an'ny fantsona samihafa.
Ny ekipanay mivarotra dia manandrana manome fahafaham-po ny mpanjifa amin'ny serivisy tena tsara. Ankoatr'izay, mifototra amin'ny fifandraisantsika akaiky amin'ireo mpanjifa dia afaka mahazo vaovao voalohany hatrany amin'ny tsena izahay ary mamolavola modely vaovao mety mifanaraka amin'ny filan'ny mpanjifa.Isan-taona dia afaka mamorona entana vaovao 3-5 mifanaraka amin'ny fironana amin'ny tsena sy ny zavatra takian'ny mpanjifa izahay, izay manamafy ny fifaninanana eo amin'ny tsena mifototra amin'ny teny nindramina. Maherin'ny 10- taona ny fitomboana, za-draharaha amin'ny ODM ary koa amin'ny OEM. Miaraka amin'ny vokatra sy serivisy premium anay, nanangana fiaraha-miasa tsara izahay sy ny mpanjifa amin'ny tsena anatiny sy ampitan-dranomasina. Raha liana amin'ny iray amin'ny entanay ianao na mila fampahalalana bebe kokoa, aza misalasala mifandray aminay. Manantena ny hiara-miasa aminao izahay atsy ho atsy.
Fahaiza-manao ho an'ny tsena any ivelany
Fampivoarana ny vokatra & Tech.Support
Mety hiatrika ireo olana ve ianao?